Materiallọ ọrụ ndị ọzọ - China Ndị ọzọ na-emepụta ihe, ndị na-eweta ya
Chemical Aha: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7 Molecular Formula ： C7H12O4 Molecular Weight ： 160 Nkọwapụta Ọdịdị: Clear colorless mmiri mmiri Molekụla arọ: 160 Ọcha%: ≥99 Ebe Igba Mmiri （101.3kPa）: 190 ℃ 3 Mmiri mmiri%: ≤0.1 Flash isi （oghe cup）: 95 ℃ Acid uru mgKOH / g: ≤0.1 Refractive index （20 ℃）: 1.4151 Relative density （20 ℃ / 20 ℃）: 1.0561 Agba （APHA）: ≤ Ngwa a na - etinye mmiri mmiri na --emepụta mmiri mmiri, ndị na - agwọ mmiri na - enye mmiri (Hydrophobic ...
Ngwurugwu nke ethylene glycol butyl ether (ETB)
Aha ngwaahịa: Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) CAS No.: 7580-85-0 Molecular formula: C6H14O2 Molekụla arọ: 118.18 Physical and chemical properties Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB): Otu kemịkalụ kemịkalụ, enweghị ntụ na-enwu ọkụ liquids na a mint ekpomeekpo. Na-agbaze n'ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ, nwere ike igbari amino, nitro, alkyd, acrylic na resins ndị ọzọ. Na ụlọ okpomọkụ (25 Celsius C), nwere ike ịbụ miscible na mmiri, ala toxicity, obere iyatesịt. N'ihi ya ...
Egbochiri Isocyanate Crosslinker KL-120
Chemical aha: Mgbochi Isocyanate Crosslinker Nka na ụzụ: Ọdịdị icha mmirimmiri odo viscous mmiri mmiri Solid ọdịnaya 60% -65% Irè NCO ọdịnaya 11.5% Irè NCO Ẹkot 440 Viscosity 3000 ~ 4000 cp na 25 ℃ njupụta 1.02-1.06Kg / L na 25 ℃ Unseal okpomọkụ 110-120 ℃ Dispers nwere ike igbari na nkịtị organic solvents, kamakwa ọma chụgara n'ime waterborne coatings. Emechara ihe eji eme ihe: Mgbe ọgwụgwọ ọkụ gasịrị, ịdị ngwa nke ihe nkiri agba nwere ike ịka mma site na ịgbakwunye ya na au ...
Nkọwapụta Ngwaahịa: Ọ bụ ihe dị iche iche na-ejikọta njikọta maka ọtụtụ ihe polymeric, ma ihe na-edozi ahụ na mmiri na-ebugharị. Ihe polymeric kwesịrị ịnwe hydroxyl, carboxyl ma ọ bụ amide dị iche iche ma gụnye alkyds, polyesters, acrylic, epoxy, urethane, na cellulosics. Njirimara Ngwaahịa: Ngosipụta siri ike-ihe nkiri na-agbanwe ngwa ngwa Ọgwụgwọ azịza Ego-enweghị Wide ndakọrịta na solubility Ezigbo nkwụsi ike nkọwapụta ： Solid ： ≥98% V ...
IKW AGKW AGKWỌ AKW OTKWỌ OT75
Productdị ngwaahịa: Anionic surfactant Sodium diisooctyl sulfonate Nkọwapụta Ọdịdị: enweghị ihe ọkụ na-acha odo odo na-acha odo odo PH: 5.0-7.0 (1% ngwọta mmiri) Penetration (S.25 ℃). 20 (0.1% azịza mmiri) ọdịnaya: 72% - 73% Solid ọdịnaya (%): 74-76% CMC (%): 0.09-0.13 Ngwa: OT 75 bụ ihe dị ike, anionic wetting gị n'ụlọnga ya na magburu onwe wetting, solubilizing na emulsifying omume gbakwunyere ike ibelata esemokwu esemokwu. Dị ka wetting gị n'ụlọnga, ọ pụrụ ịbụ u ...
Aha ngwaahịa CAS NO. Ngwa Crosslinking gị n'ụlọnga Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Akụrụngwa na-emecha ； Ihe mkpuchi efere ； General ọla mechara sol Nnukwu ihe siri ike na-emecha ； Mmiri na-emecha ； Mkpuchi mkpuchi. Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Mee ka adhesion nke lacquer dị iche iche dịkwuo mma, meziwanye nguzogide mmiri, mmebi kemịkal, nguzogide dị elu na esemokwu nke agba agba egbochi Iso .. .
Propylene Glycol Phenyl Ether (PPH) Nkọwa
Efrata: 3-Phenoxy-1-propanol Mkpụrụ akwụkwọ usoro: C9H12O2 Molekụla arọ: 152.19 CAS NO.: 770-35-4 Nka na ụzụ teknụzụ: Ule Ihe Ndị Ọkwa Industrial Ọdịdị Light edo edo mmiri Assay% ≥90.0 PH 5.0-7.0 APHA ≤100 Jiri: PPH bụ enweghị mmiri mmiri na-enweghị ntụpọ na isi ụtọ na-esi ísì ụtọ. Ọ bụ nsị na-adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi iji belata agba V Celsius mmetụta dị ịrịba ama. Dị ka oru oma coalescent dị iche iche mmiri emulsion na dispersion coatings na gloss na ọkara gl ...
Chemical aha: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate Molekul usoro: C20H33N3O7 Molekụla arọ: 427.49 CAS Mba .: 57116-45-7 Nka na ụzụ: Ọdịdị na-enweghị ntụ na-acha odo odo transperent mmiri mmiri solubility zuru kpamkpam miscible na mmiri na 1: 1 na-enweghị stratification Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 Viscosity (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S Solid ọdịnaya ≥99.0% Free amine ≤0.01% Oge crosslinking bụ 4 ~ 6 h Scrub eguzogide ...
Efrata: Ethylene glycol diacetate Mkpụrụ akwụkwọ usoro: C6H10O4 Mkpụrụ ahụ: 146.14 CAS NO.: 111-55-7 Nka na ụzụ: Ọdịdị: Colorless transperent mmiri mmiri Ọdịnaya: ≥ 98% Mmiri: ≤ 0.2% Agba (Hazen): ≤ 15 Mgbu: fọrọ nke nta adịghị egbu egbu, rattus norvegicus ọnụ LD 50 = 12g / Kg ibu. Jiri: Dị ka ihe mgbaze na agba, nrapado na agba ndị na-emepụta ihe. Iji obere ma ọ bụ kpamkpam dochie Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE wdg, na atụmatụ nke imeziwanye ọkwa, na-edozi ihicha s ...